सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी कसरी गर्ने ? के गर्दा राम्राे प्रतिफल पाईन्छ ? – Facebook Khabar
नयाँ लगानीकर्ताले कारोबार गर्न आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरिसके पछि पहिले आफूले किन्न चाहेको कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्छ। उक्त कम्पनीको प्रडक्ट क्यापिटल कति छ? नेट वर्थ कति छ? लगायतको सबै सूचना लिएर अग्रजसँग सल्लाह गरेर लगानी गर्नु पर्छ।
अग्रज लगानीकर्ताले शेयर बजारको धेरै उतार चढाव भोगिसकेकोले उनीहरूसँग सल्लाह गर्नु एकदमै राम्रो हो। अहिले बजारमा सल्लाह दिने पनि धेरै छन्। उनीहरूलाई फोनबाटै सल्लाह लिन पनि सकिन्छ।
एक भन्दा धेरैसँग सल्लाह लिए पछि आफ्नो मनमा लागे पछि मात्रै लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। लगानी गर्दा तीन वटा आइमा ध्यान दिनु पर्छ, इन्फरमेसन लिने, इन्टर्याक्सन गर्ने अनि मात्रै इन्भेष्ट गर्ने। यो सेयर बजारको मन्त्र नै हो।
यदि कुनै लगानी कर्ताले एक करोड लगानी गरेको छ भने ६० लाख रुपैयाँ राम्रो राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने। र ४० प्रतिशत भने किनबेच गरी रहने। त्यो ४० प्रतिशतले भने आफूलाई आवश्यक पर्ने खर्च टार्न पुग्छ। यो पैसा दैनिक ट्रान्जेक्सन गर्यो भने प्रोफिट बुक पनि हुन्छ। दैनिक ट्रान्जेक्सन गर्यो भने खर्च पनि निस्कन्छ भने अनुभव पनि हुन्छ।
बोनस दिने, हरेक वर्ष राम्रो मुनाफा कमाउने कम्पनीमा गरेको ६० प्रतिशत पैसाले भविष्यमा राम्रो मुनाफा दिन सक्छन्। अहिले राम्रो कम्पनीहरूमा नविल, एनआइसी, प्रभु लगायतका बैक हुन्। उ
नीहरूले राम्रो बोनस दिइरहेका छन्। केही लगानीकर्ताहरूले कहिले लगानी गर्दा हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन्। बलियो कम्पनीमा जहिले लगानी गर्दा पनि हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले कहिले सोध्छन् निस्कने समय र भित्रने समय कुन हो भनेर।
तर म भन्छु, एक पटक लगानी गरे पछि पुजी बजारबाट निस्कन सक्दैन। वा भनौँ पुजी बजारमा निस्कने र भित्रने समय नै हुँदैन। हो कुनै समयमा कम फाइदा होला र कहिले फाइदा होला।
बजार कहिले घट्छ र कति बेला बढ्छ भनेर भन्न सक्ने कोही छैन। बजार बढ्छ किन? घट्को लागि । बजार घट्छ किन? बढ्नको लागि। बजार बढ्नु घट्नु नै बजारको ब्युटी र खुबीलीटी हो। त्यसैमा लगानीकर्ताले कमाउने हो। सधैँ एकैनास भयो भने त बजार चलायमान नै भएन नि।
राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मानिसले सेयर बजारमा राम्रो पैसा कमाउन सक्छ। अहिले संसारको सबै भन्दा धनी मानिस आइटी र सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू छन्। यसको कारण यहाँ टिक्नको लागि अध्ययन अत्यावश्यक छ।
नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा राम्रो सँग अध्ययन गरेर मात्रै प्रवेश गर्नु पर्छ। टेक्निकल फन्डामेन्टल अध्ययन गर्न पर्छ सम्भव भए सम्म प्रशिक्षण लिएरै प्रवेश गर्दा राम्रो हुन्छ। आफू भन्दा अग्रज सँग बुझेर मात्रै लगानी गर्ने गर्नु पर्छ किन भने आफूले लगानी गरेको पैसा गाढा मिहेनतको पैसा हुन्छ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारसँग उकेराकर्मी सुरेन्द्र बजगाईँले गरेको कुराकानीमा आधारित भएर उकेरामा लेखिएकाे छ ।